UltimateWM, VTWM, Wayland, Wingo, WM2: 5 WM kale oo loogu talagalay Linux | Laga soo bilaabo Linux
UltimateWM, VTWM, Wayland, Wingo, WM2: 5 WMs kale oo loogu talagalay Linux
Maanta waxaan sii wadaynaa kuweena boostada sagaalaad iyo qalinka on Maareeyayaasha Daaqadaha (Maareeyayaasha Windows - WM, Ingiriis ahaan), halkaas oo aan dib ugu eegi doonno waxyaabaha soo socda 5, liiskayaga 50 hore looga hadlay.
Sidan oo kale, in la sii wado in la ogaado dhinacyada muhiimka ah ee iyaga ka mid ah, sida, ma yihiin iyo in kale mashaariic firfircoon, in Nooca WM iyagu iyagu, maxay yihiin astaamaha ugu muhiimsaniyo sidee loo rakibay, dhinacyo kale.
“WM cusub oo rajeyneysa inuu noqdo GUI dhameystiran mustaqbalka, waana sababta hadda loogu magac daray Mashruuca Deegaanka Unix Desktop (UDE). Mashruucu ma adeegsan karo maktabado gaar ah oo GUI ah sida QT ama GTK +. Waxay isticmaashaa oo keliya heerka 'Xlibs', si looga dhigo mid dhakhso badan, mid fudud oo looga fogaado ku tiirsanaanta. UltimateWM ama UDE waxay leeyihiin gabi ahaanba asal ahaan 'Look'n'Feel', kaliya maahan nuqul kale oo ka mid ah adeegsadaha maaraynta daaqada maaraynta daaqada "caadiga ah".".
Mashruuc aan firfircooneyn: Waxqabadkii ugu dambeeyay ee la ogaadey ku dhowaad 6 sano kahor.
Waxay bixisay isticmaalka ugu badan ee shaashadda shaashadda, xasilloonida, iyo adeegsiga agab aad u hooseeya.
Waxaa loo qorsheeyay in si aad ufiican loo adeegsado kadib marxalad waxbarasho oo gaaban.
Ma lahayn bar-hawleed ama guddi desktop ama wax u dhigma. Daaqadahana waxaa ka maqnaa bar cinwaan oo sidaas darteed ma lahayn badhamado uu ku xiro, cabirro, astaan, ama weyneeyo daaqadaha geesaha dariishadaha. Badhamadaas waxaa lagu badalay waxa loogu yeero laba-geesle ama malab-malab soo muuqday markii isticmaaleyaashu riixeen daaqadda daarkiisa.
Isdhexgalka isticmaalaha ayaa si buuxda u shaqeeyay adoo adeegsanaya badhamada jiirka kala duwan ee xuduudaha daaqada iyo asalka desktop, sababtaas darteed, isticmaalka hufan ee UDE wuxuu ahaa mid suuragal ah oo kaliya iyadoo la adeegsanayo jiir saddex-batoon ah, maadaama ay kaliya bixiso taageero aad u aasaasi u ah tuuryo kumbuyuutareedyada .
Wixii soo degsashadeeda iyo rakibiddeeda ama macluumaad dheeri ah, kuwan soo socda waa la karti yeelay isku xirka. Iyo tan kale isku xirka Haddii loo baahdo
"Maareeyaha Daaqad Fudud oo Fudud oo Nidaamka Daaqadda X".
Mashruuc aan firfircooneyn: Waxqabadkii ugu dambeeyay ee la ogaaday in kabadan 5 sano kahor.
Waxay bixisay baararka cinwaanka, daaqadaha qaabeeya, qaababka kala duwan ee maareynta astaanta, shaqooyinka macro ee lagu qeexay adeegsadaha, diiradda-iyo-tilmaamida kumbuyuutarka, iyo furaha isticmaale-cayiman iyo badhanka tilmaamaha.
Waxaa si isdaba joog ah loogu fuliyay jihada hore sida macmiilkii ugu dambeeyay ee la raray, sidaa darteed markii lagu fuliyo habkaas, markii laga baxayo, fadhiga isticmaalaha waa la joojinayaa.
Sida caadiga ah, waxay siisay daaqadaha dalabka ee ku hareeraysan soohdinta oo leh cinwaanka cinwaanka dusha sare. Barta Cinwaanka ee ku jirta magaca daaqadda, aag leydilayaal ah oo tilmaamaya goorta daaqadda ay soo gasho kumbuyuutar, iyo saddex sanduuq oo loo yaqaan "badhanka cinwaanka cinwaanka."
Adoo riixaya badhanka cinwaanka cinwaanka oo leh fallaarta hoose ee korkeeda saaran waxay soo saartay menu leh hawlo kale oo badan oo lagu dabaqi karo daaqadda.
WM-kan la cusbooneysiiyay waxaa badanaa laga helaa bakhaarro badan oo kala duwan GNU / Linux Distros, magaca xirmo "vtwm"Sidaa darteed, waxay kuxirantahay maareeyaha baakadka loo adeegsaday, garaaf ahaan ama terminal, si fudud ayaa loo rakibi karaa. Macluumaad dheeraad ah oo dheeri ah oo ku saabsan WM ayaa laga heli karaa waxyaabaha soo socda isku xirka ama tan kale isku xirka.
"Maareeyaha Daaqadda oo dhameystiran oo adag iyo halabuur wuxuu u maleynayaa inuu yahay bedel casri ah, aad u fiican oo ka fudud Linux X Server, sidaas darteed, way fududahay in la horumariyo lana ilaaliyo Sidaa darteed, waxaa la filayaa in Degaanno Desktop ah oo adag, sida GNOME iyo KDE, ay si buuxda oo dhammaystiran u hirgelin doonaan iyo gaar ahaan mustaqbalka dhow ".
Mashruuc firfircoon: Waxqabadkii ugu dambeeyay waxaa la ogaaday waxyar ka yar bil ka hor.
Tipo: Madax banaan.
Waxay bixisaa baabi'inta xaqiiqooyin badan oo murugsan si loo helo shaqo aad u fudud. Waxay asal ahaan ka shaqeysaa iyadoo la fududeynayo xargaha garaafyada. Sababta sababta, waxay sidoo kale maamushaa shaqada halabuurka keligiis.
Asal ahaan waa maamuus u sameeyaha laxamiistaha inuu la hadlo macaamiishooda iyo waliba hirgelinta maktabada C ee borotokoolkaas. Laxamiistuhu wuxuu noqon karaa adeege kaligiis soo bandhiga oo ku shaqeynaya qalabka 'Linux kernel iyo evdev', qalabka X, ama macmiilka Wayland laftiisa.
Waxay sidoo kale bixisaa hirgelinta tixraaca Weston ee ku dhex jirta shaqadeeda muusig ahaan. Weston waxay u shaqeyn kartaa sidii macmiil X ah ama hoosta Linux KMS waxayna lashaqeysaa qaar ka mid ah macaamiisha demo. Curiyaha Weston waa curiyaha ugu yar uguna dhakhsaha badan wuxuuna ku habboon yahay kiisas badan oo mobilo ah iyo kuwo gundhig u ah.
WM-kan la cusbooneysiiyay waxaa badanaa laga helaa bakhaarro badan oo kala duwan GNU / Linux Distros, magaca Xidhmada "xwayland"Sidaa darteed, waxay kuxirantahay maareeyaha baakadka loo adeegsaday, garaaf ahaan ama terminal, si fudud ayaa loo rakibi karaa. Macluumaad dheeraad ah oo dheeri ah oo ku saabsan WM ayaa laga heli karaa waxyaabaha soo socda isku xirka.
"Maareeyaha Daaqadda oo gebi ahaanba ku qoran luuqadda barnaamijka Go".
Mashruuc firfircoon: Waxqabadkii ugu dambeeyay ee la ogaaday in kabadan 2 sano kahor.
Waxay leedahay dhammaan ku tiirsanaanteeda, laga bilaabo isgaarsiinta lala yeesho X si loo sawiro qoraalka daaqadaha, kuna qoran Go. Sidoo kale, badanaa waa ICCCM iyo EWMH.
Waxay leedahay laba astaamood oo, marka la isku daro, ka duwanaan kara maamulayaasha daaqadaha kale: Taageerida siyaasadaha meelaynta daaqadda, oo la jaan qaadi kara nooca Tiling iyo Stacking WMs. Iyo hal adeegsi oo ka mid ah goobaha shaqada halkii kormeer, taasoo u oggolaanaysa kormeere kasta inuu soo bandhigo goobtiisa shaqo, kana madaxbannaan kormeerayaasha kale.
Aad ayaa loo qaabeyn karaa. Tan waxaa ka mid ah isku xirka amarro fara badan oo la riixo ama riixayaasha jiirka, qurxinta daaqadda, iyo dejinta jillaabyada dabka iyadoo ku xiran hadba xaaladaha ciyaarta. Dhammaan qaabeynta waxaa lagu sameeyaa iyadoo la adeegsanayo qaab feyl ah oo INI ah oo lagu taageerayo beddelka beddelaadda fudud. Ma jiro adeegsi faylasha XML ah, wax dib loo uruurinayo, iyo qoraallo looma isticmaalo.
Wixii soo degsashadeeda iyo rakibiddeeda ama macluumaad dheeri ah, kuwan soo socda waa la karti yeelay isku xirka.
“Maareeye Daaqad aad u yar oo Nidaamka Daaqada X".
Mashruuc aan firfircooneyn: Waxqabadkii ugu dambeeyay ee la ogaado qiyaastii 9 sano kahor.
Waxay siisay awood ay ku u wareeji daaqadaha shaashadda, dib u cabbir daaqadaha si toos ah iyo xagal ahaanba, qari daaqadaha, soo celi daaqadaha qarsoon, tirtirna daaqadaha.
Waxay siisay qaab xarago leh daaqad kasta oo la maareeyo, laakiin ma aysan siinin astaamo, isku xirnaansho, kombiyuutarro teknolojiyad ah, menus xidid lagu ballaarin karo, iyo baararka qalabka, iyo waxyaabo kale.
WM-kan la cusbooneysiiyay waxaa badanaa laga helaa bakhaarro badan oo kala duwan GNU / Linux Distros, magaca xirmo "wm2"Sidaa darteed, waxay kuxirantahay maareeyaha baakadka loo adeegsaday, garaaf ahaan ama terminal, si fudud ayaa loo rakibi karaa. Macluumaad dheeraad ah oo dheeri ah oo ku saabsan WM ayaa laga heli karaa waxyaabaha soo socda isku xirka.
Waxaan rajeyneynaa tan "waxtar yar post" ku saabsan kuwan soo socda 5 «Gestores de Ventanas», kana madax bannaan wax kasta «Entorno de Escritorio»loo yaqaan UltimateWM, VTWM, Wayland, Wingo, WM2, noqo mid dan weyn iyo dan u leh, dhammaan «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta baahinta ee nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo sii kordhaya ee «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » UltimateWM, VTWM, Wayland, Wingo, WM2: 5 WMs kale oo loogu talagalay Linux
Sii deynta Gnome 3.38 horey ayaa loo shaaciyey waana kuwan warkiisa
Oracle waxay shaacisay sii deynta Java SE 15, ogow waxa cusub